Dec 28, 2016 | Myanmar, NEWS |0|
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော ဒေသမှာ အစိုးရ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေ နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်တုန်း ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးတွေ အဓမ္မ ပြုကျင့် ခံရတာမျိုး၊ ကျေးရွာ တွေ မီးရှို့ ဖျက်စီး ခံရတာမျိုး တွေ ရှိခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲ ပြောဆို ချက် တွေ အပေါ် လုံးဝ ချေဖျက် နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်စေ၊ အတည်ပြု လောက်အောင် ဖြစ်စေ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အထောက်အထားတွေ မတွေ့ရ သေးဘူး လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ကြည်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ မောင်တောဒေသမှာ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးတုန်းက အဓမ္မ ပြုကျင့် ခံခဲ့ ရသူတွေလို့ ထွက်ဆိုသူ အမျိုးသမီး တချို့ဟာ ကြိုတင် လေ့ကျင့် ထားသလို ဇာတ်လမ်း တစ်ခုတည်းကို ပြောဆို တာမျိုး၊ ရှေ့နောက် မညီ ထွက်ဆို တာမျိုး တွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်ကြည်က ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေ ဆိုတာ မသဲမကွဲ ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမျိုး အမြဲတမ်း ရှိနေတဲ့ အတွက် ဆင်ခြင်တုံ တရားနဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင် ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးအောင်ကြည်က ဆိုပါတယ်။ အစိုးရ စစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာ...
ဒီလ အစောပိုင်းက ဟောကြောခဲ့တဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ကို You Tube မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး ကကြားနာသူ ပရိသတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်တွေနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “သူတို့ကို အထင်မသေးနဲ့”လို့ သတိပေး စကားပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ရည်ညွှန်းပြီး နိုင်ငံက တစ်ခြား ဘာသာရေးနှစ်ခု ကိုကြောက်ရွံနေမှုကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ “သူတို့ အဖွဲ့တွေ အင်အားကောင်းလာရင် သူတို့ ငါတို့ကို ဘာလုပ်မလဲ သူတို့ပြ န်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်” ဘုန်းကြီးက မိန့်ပါတယ်။ “မွတ်စလင်တွေနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ တိုးပွားလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့ရဲ့ယူဆချက်တွေဟာ အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်မှုမရှိပါဘူး အဲဒါကို ဘုန်းကြီးက ဗီဒီယိုထဲမှာပြောဆိုထားပြီး ယုတ္တိ မရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်ရွံမှုကို ပြသခဲ့တယ်”လို့ တရားတော်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ အောင်ကောင်းမြတ်က ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရအတွက် ဟားဗက်အက်ရ်ှစင်တာက သုတေသနပြု ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်လူဦးရေ အရမ်းတိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ မရှိဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တရားတော်ထဲမှာ ဘုန်းကြီးက ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး ကိုရှုတ်ထွေးစွာပြောဆိုထားပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ” လို့ သူကမေးပါတယ်။ ကြားနာသူတွေက “ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် ဗမာ ရခိုင် ရှမ်း”လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ကုလားက စာရင်းထဲမှာပါလား ဘုန်းကြီးကမေးပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အသားမည်းသူတွေ ကိုနှိမ်တဲ့ စကား အသုံးအနှုံးကို အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ခရစ်ယာန်တွေကော စာရင်းထဲမှာပါလား”...
Dec 26, 2016 | English, NEWS |0|
The UN Security Council has voted in favour ofaresolution demanding the halt of settlement activity by Israel on occupied Palestinian territory with the United States notably abstaining. The resolution was put forward at the 15-member council foravote on Friday by New Zealand, Malaysia, Venezuela and Senegal,aday after Egypt withdrew it under pressure from Israel and US president-elect Donald Trump. Israel and Trump had called on the US to veto the measure. “This isaday of victory for international law,avictory for civilised language and negotiation andatotal rejection of extremist...
SHAH ALAM: Malaysians must continue to playaproactive role in protesting against the oppression of the Rohingya Muslims in Myanmar, saysasenior official of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). OIC Special Envoy to Myanmar, Syed Hamid Albar said this was necessary in order to urge the Myanmar government to give citizenship to the Rohingya and to act against those who spread hatred and incited violence against the minority ethnic group. “We want Myanmar to recognise the Rohingya as an ethnic group with rights and who were recognised as part of the country’s population by the first...
NEW YORK: Malaysian Permanent Representative to the United Nations Ramlan Ibrahim, who returns home tomorrow afteratwo-year stint in New York, has described Friday’s Security Council’s vote calling on Israel to stop the illegal building of settlements as his “crowning experience”. Ramlan, whose tenure here coincides with Malaysia’s two-year non-permanent membership of the United Nations Security Council (UNSC) ending Dec 31, said he was elated over the anti-settlement vote. This was clearlyadiplomatic success story for Malaysia – and for Ramlan – who together with three other non-permanent members New Zealand, Senegal and Venezuela, had put the...